“ခေါင်းထဲ က အကျိတ်ကို ခွဲ ဖို့ သိန်း (၁၀၀)ကျော် လို အပ်နေတဲ့ ဆရာလေးကို ကူညီနိုင်သူများ ကူညီပေးကြပါအုံး”
ကူ ညီပါရန်​….​ မေတ္တာရပ်​ခံခြင်း ရတနာဥယျာဉ်​ တိုင်းရင်းသားလူငယ်​ ဖွံ့ဖြိုး​ရေး​ကျောင်း မှ ဆရာ​လေး ​ဒေါ်ယုဝတီ သည်​ ဦး​ခေါင်း ခွဲစိတ်​ကုသရမည့်​​ဝေဒနာ ခံစား​နေရပါသည်​။ ဦး​နှောက်​နဲ့ ဦး​ခေါင်းခွံကြားက အကြိတ်​ကို ခွဲထုတ်​ရမယ်​ ခန့်​မှန်းကုန်​ကျ​ငွေ ကျပ်​သိန်း တစ်​ရာ​ကျော်​ ကုသမည့်​​နေရာ =ထိုင်းနိုင်​ငံ၂၀၁၉ / ၁၁ လပိုင်း […]
မေမေရေ… ရောက်ရာ အရပ်က အမြန်ပြန်လာပါ။ မိန်းမရေ.. ရောက်ရာ အရပ်က အမြန်ပြန်လာပါ။
ဒီ ဗွီဒီယိုလေးကို ကျော်မသွားကြပါနဲ့ လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ AlinnMyay(အလင်းမြေ) (မေမေရေ… ရောက်ရာ အရပ်က အမြန်ပြန်လာပါ။ မိန်းမရေ.. ရောက်ရာ အရပ်က အမြန်ပြန်လာပါ AlinnMyay(အလင်းမြေ) စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာ ဒီ ဗွီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီးသူတိုင်း ရှယ်ဖြစ်အောင် ရှယ်ပေးကြဖို့ လေးစားစွာ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုယ်နဲ့ မသိပေမယ့် […]
ရေသန့်ဘူး အဖုံးကို bus ကားဖြင့် ဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ တောင်ကြီးမြို့က ကားဆရာ ( ဗီဒီယို )
ရေသန့်ဘူး အဖုံးကို bus ကားဖြင့် ဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ တောင်ကြီးမြို့က ကားဆရာ ( ဗီဒီယို ) ( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) ပရိသတ်ကြီးရေ…. မီးခြစ်ကို ကားဘီးနဲ့ ဖိပြီး ခြစ်ပြတာတို့…. ဘတ်ဟိုးကားကြီးတွေနဲ့ အပ်ချည်ထိုးပြတာတို့…ဇွန်းထဲရေထည့်ပြီး သယ်ပြတာတို့ ….ခြေထောက်နဲ့ […]
“အွန်လိုင်းမှာ လူကြည့်များနေတဲ့ ကိုရင်လေးတွေရဲ့ စက်ဘီးစီးကျွမ်းကျင်မှု့ ရုပ်သံဖိုင်”
“အွန်လိုင်းမှာ လူကြည့်များနေတဲ့ ကိုရင်လေးတွေရဲ့ စက်ဘီးစီးကျွမ်းကျင်မှု့ ရုပ်သံဖိုင်” ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများဆုံး ရှိတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘုရား တရား သံဃာ ဆိုပီး ရတနာသုံးပါး ရှိပါတယ်။ သံဃာဆိုတဲ့ အထဲမှာ သာမဏေ ကိုရင်လေးမှ အစ ထေရ်ကြီး […]
မြန်မာပြည်သူတွေကို ဗလာမပါ ပိုက်ဆံကံစမ်းမဲတွေ ဖောက်ပေးနေတဲ့ Sinon ( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ရရှိထားတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မော်ဒယ်လ် Sinon Loresca ဟာ လတ်တလောမှာ မြန်မာပြည်ကို ရောက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. မြန်မာပြည်ကို ချစ်လွန်းတာကြောင့် မြန်မာပြည်ကို […]
“ရန်ကုန်မှာ ကလေးသူခိုးတွေ သောင်းကျန်းနေပါတယ်.. သတိထားကြဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်”
လက်ဆင့်ကမ်း Shareပေးကြပါ အ.ထ.က (၂) အင်းစိန်မှ ဆဌမတန်းကျောင်းသားကို ကျောင်းဆင်ချိန်၌ လူတစ်ဦးက ခိုးယူ ခေါ်ဆောင်သွားသော်လည်း ကလေးမှာ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာ နာမည်ကြီးစာတော်တဲ့ ကျောင်း အထက၂အင်းစိန်မှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ မောင်ယောရှု ဆဌမတန်း က ကျောင်းသား ဘုရားကယ်လို့ အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ် သူကိုမေးတော့ သူကပြောပြတယ်… […]
ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀) တန်ဖိုးရှိ သာသန ဓမ္မ ဗိမ္မာန်တော် ရေစက်ချလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရတနာခင်တို့ မိသားစု
ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀) တန်ဖိုးရှိ သာသန ဓမ္မ ဗိမ္မာန်တော် ရေစက်ချလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရတနာခင်တို့ မိသားစု သရုပ်ဆောင် ရတနာခင် တို့ မိသားစု ၊ မိဘ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ စုပေါင်း လှူဒါန်းထားခဲ့တဲ့ သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းခွဲကျော် တန်ဖိုးရှိ မြင့်ထွန်းဦး ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက် […]